किन प्रियंकाको फोटो ट्रोल बन्यो ? - Parichaya.com
By परिचय	 On २० बैशाख २०७८, सोमबार १७:१५ 0
अभिनेत्री प्रियंका कार्की गर्भवती छिन् । उनले नयाँ वर्षको छेको पारेर आफू गर्भवती भएको सार्वजनिक गरिन् । उनले श्रीमान् आयुष्मान देशराज जोशीसँगको एक तस्विर पोष्ट गर्दै लेखेकी थिइन्- ‘हामी गर्भवती भएका छौँ’ ।
प्रियंका सोही समयदेखि नै ट्रोलको शिकार बनिन् । कतिपयले आशुष्मान र प्रियंकालाई आधा-आधा समय पेट बोक्ने होर ? भन्दै उडाए । कतिपयले बेलाबेला चिप्लिने प्रियंकाको बोलीलाई लिएर ट्रोल बनाए । तर, प्रियंकालाई के डर ? उनले आफ्नो गर्भवती पेट देखाएर निरन्तर फोटो पोष्ट गर्दै आइन् । यस्तैमा, प्रियंकाले एउटा जुस पिउँदै गरेको फोटो पोष्ट गरिन् ।
जसमा उनले मात्र होइन, उनको पोटले पनि जुस पिइरहेको देखाइएको छ । उनको पेटमा एउटा चित्र कोरेर जुस पिइरहेको देखाइएको छ । उनले आफूसँगै पेटको बच्चाले पनि जुस पिइरहेको संकेत दिन खोजेकी छिन् । त्योसँगै यस्तो समयमा स्वस्थ खानेकुरा खानुपर्ने संकेत गरेकी छिन् । तर, उनको यस फोटोलाई पनि ट्रोल बनाइएको छ ।
यस फोटोमा कतिले नकरात्मक प्रतिकृया दिएका छन् भने कतिपयले सकरात्मक र सन्देशमुलक भएको बताएका छन् । प्रियंकाको यस फोटो उनी आफैँले कन्सेप्ट बनाएर खिचेकी भने होइनन् । यस्तै फोटो विदेशी सेलिब्रेटीहरुले खिचिसकेका छन् । त्यसैले प्रियंकालाई कपी-पेष्ट गरेको भन्दै गाली समेत गर्नेहरु धेरै छन् ।
प्रियंका आफूलाई नकारत्मक गालीले केही असर नपर्ने बताउँदै आएकी छिन् । उनले भन्ने गरेकी छिन्, ‘नबुझ्नेलाई बुझाउन सकिएला, तर खराब नियत राख्नेलाई बुझाएर काम छैन ।’